प्रशासनको न्यानो राहतले बृद्ध‘बाटु रावल’जस्तै सयौ बेसहारा खुसी ! – KarnaliPost Daily
प्रशासनको न्यानो राहतले बृद्ध‘बाटु रावल’जस्तै सयौ बेसहारा खुसी !
९ माघ २०७७, शुक्रबार ०९:१३ February 1, 2021 by Karnali Post Daily
चौरासी बेन्जन खुवाएर,सुनको खटियामा सुताएरै ६० नाघिसकेका बृद्ध बा आमाको चाउरी परेको अनुहारमा खुसी फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन् । बृद्ध बा आमाका चाउरी परेको अनुहारमा तब मात्र मुस्कान देखिन्छ,जब उनिहरुलाई मिठोे बोलीभाषा,माया स्नेहा र सम्मान पाईन्छ । भनिन्छ जेष्ठनागरिक,सम्मानजनक बोली व्यवहारका र न्यायो मायाका भोकानै हुन्छन् ।
जब जब कुनै क्षणमा त्यो भोक कसैले मेटिदिन्छ अनि बृद्ध बेसाहराहरुको खुसीको सिमाननै रहदैन् । त्यहि खुसी तातोपानी गाउँपालिका २ की ६० वर्षिय बृद्ध महिला बाटु रावलमा भेटियो । चिसोबाट बच्न सुरक्षित रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाद्धारा न्यानो कम्बल वितरण गर्ने क्रममा तातोपानी गाउँपालिकामा भेटिएकी बृद्ध रावलले राहतका रुपमा पाउन त एक कम्बल मात्रै पाएकी हुन् ।
साथमा सिडिओ भुपेन्द्र थापाले ‘चिसो बढेको छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला तपाईको साथमा सरकार छ आमा’ मात्र के भनेका थिए बृद्ध बाटु रावल खुसीले कम्बलको (घुम्चो) हालेर बिना सुरताल नाच्न थाल्नु भयो । साहेत राहत पाउँदा मनैदेखि खुसीको भएको प्रतिबिम्ब थियो होला, हामीले त्यहिनै बुझ्यौ ।
उहाँले नाच्दै भन्नुभयो,“काम गन्न नसक्न्या हामी जैथा बुढाखाडाकन सरकारले भत्ता दिन्या,चिसोमा कम्बल दिन्या भएपछि छुट्टै भगवान खोज्न कहाँ जानु । कम्बल दिन्या यी साव नै मेरा भगवान भया ।” उहाँको यो, भनाईले घरमा निकै दुख पिडामै हुन हुुन्थ्यो भन्ने पक्कै हैन्,तर बृद्धहरुलाई खुसी राख्न चिसोमा न्यायो,राम्रो व्यवहार माया र सम्मान चाहिदो रहेछ भन्ने स्पष्ट प्रष्ट छ ।
त्यस्तै,विहिबारकै दिन माघको सिरसिर चिसो हावामा च्यातिएको कपडा लगाएर सडकमा हिडिरहेका तातोपानी २ का रवि कामी बाटोमै छोपेर बाक्लो फाईबर जकेट दिइयो । उनि कुन सुरमा कता हिडिरहेका थिए ? तर एकाएक नयाँ ज्याकेट पाउँदा खुसीले मख्ख हुदै हाँसेरै भने,“यो जकेट मलाई हो,कति राम्रो जकेट,विहान बेलुका चिसोले निकै सताउन्थ्यो अब त तातो हुने भयो ।” कसले दियो किन दियो ? जकेटको पैसा पो दिनु पर्ने हो की भनेर उनि अकमक्क पक्कै थिए । तर प्रशासनले निशुल्क रुपमा राहत दिएको हो भन्ने थाहा पाएपछि उनि खुसी हुदै सडकबाट घर गए ।
साथै, तातोपानी ५ की बृद्ध महिला फाँचु दमाईले भन्नुभयो,“एउटै जकेट अथवा कम्बल मात्र किन नहोस हामी जस्ता बेसहाराहरुलाई मायाले सम्मानका साथ दिँदा लाखौ बराबरको राहत पाएको महसुस हुदो रहेछ ।” कोरोना महामारीमा सरकारबाटै चामल, नुन,तेल पाए । अहिले चिसोमा राम्रो कम्बल पाए । दिनदुखीको राहत उद्दरामा सरकारले गरेको काम सरायिन रहेको उहाँको भनाई छ ।
यी तीन पात्र एक उदाहरण मात्र हुन् । जुम्लामा चिसोबढे संगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले वितरण गरेको न्यानो कम्बल तथा ज्याकेट पाएपछि सयौ बेसाहारा नागरिकहरु खुसी छन् । गत पुसमा ९ महिनादेखि ओडारमै बसेकी बृद्ध महिला,लगायत ४ जना सडक मानवलाई उद्दार गरी सुर्खेत पठाइएको छ । सरकारी राहत संगै मानवियता देखाउदै प्रहरी प्रशासनको टोली राहत स्वरुप न्यानो कम्बल जकेट बाड्दै गाउँगाउ पुगेको छ ।
अहिले सम्म प्रशासनले चन्दननाथ नगरपालिका, सिंजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाका सयौ जेष्ठनागरिक,सडक मानव तथा बेसहाराहरुलाई राहत वितरण गरिएको छ । यो क्रम अझै जारी छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले भन्नुभयो,“विपद व्यवस्थापन कोषबाट चिसो तथा हिमपात पुर्वतयारी योजना अनुसार राहत वितरण गरिरहेका छौ । एकल महिला, विपन्न,सडक मानवहरुलाई खोज्दै दिन्छौ ।” जिल्लाभरीका करिब २ सयबढी नागकरिलाई यो हिउँदमा न्यानो कम्बल वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
हिउँदको चिसोमा सडक जीवन बिताइरहेका सडक मानव, जेष्ठनागरिक, बालबालिकालाई न्यानो प्रदान गर्न प्रशासन, सुरक्षाका प्रमुख तथा संचारकर्मीहरुको टोली गाउँगाउँमा पुगेर राहत वितरण अभियानमा जुटेको प्रजिअ थापाले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले न्यानो कपडा वितरण संगै नागरिकलाई सुरक्षित रहन, खागो ताप्न, चिसोमा बाहिर ननिस्कीन,झोलिलो पर्दाथ खान सल्लाह समेत दिनभुएको छ ।
प्रशासन कार्यालय जुम्लाले हिमपात योजना निर्माण गरेको छ । जस अन्र्तगत विपन्न र सडक मानव प्राथमिकतामा परेका छन् । कठ्यांग्रिदो चिसोबाट कसरी बचाउने भन्ने बिषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्दै प्रशासनले हरेक विपन्न र बेसहारा नागरिकको पहिचान गरी न्यानो कपडा वितरण गरेको डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लले बताउनुभयो ।
स्थानीय प्रशासनले चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी र सिँजा गाउँपालिकामा पुगेर विपन्नलाई न्यानो उपलब्ध गराएको हो । गाउँमै न्यानो कपडा उपलब्ध भएपछि बाटु रावल जस्तै सयौ विपन्न नागरिक निकै खुसि भएका छन्